चरा सञ्झ्यालमा उड्यो - राम्रो चिन्ह वा खराब चिन्ह?
यदि तपाइँ विन्डो खुल्ला खुल्ला छोड्नुहोस् भने, छिट्टै वा पछि तपाइँको परिवार पक्षीबाट कसैलाई भेट्न सकिन्छ। धेरै मानिसहरू यसबाट डराएका छन्, सबै विचार गरे पछि यदि पक्षी एक खिडकीमा उडेको छ - एउटा चिन्ह यो अप्रिय छ। के यो वास्तवमा यति छ?
मानिसहरू किन चराहरूको भ्रमणको बारेमा धेरै नकारात्मक छन्? पुरातन समयका कारण मानिसहरूले यस्तो नियमितता देखाएका छन्: पक्षीले विन्डोमा उडेको छ - खराब चिन्ह, दुःखलाग्दो समाचारलाई सम्भवतः सम्भवतः नजिकको व्यक्तिको बारेमा। विशेष गरी डरलाग्दो डरले झन् झरेर घर फर्क्यो। यो यी सानो चीजहरू हुन् जुन मानिसहरू पक्षीहरूलाई श्राप गर्न मानिन्छ।
यो चिन्ह कहाँबाट आयो? चरा सञ्झ्यालमा उड्यो - र केवल, तर मूड पहिले नै लामो समयसम्म बर्बाद भएको छ। पुराना दिनहरूमा, आत्माहरूको संसारसँग सम्बन्धित पक्षहरू। यो विश्वास भएको थियो कि जब तिनीहरू हवाइजहाजमा उभिन्छन्, विच्छेदित प्राणीहरू जस्तै, तिनीहरूसँग जादुई संसारसँगको सम्बन्ध छ । यहाँबाट अन्धविश्वासको अर्को व्याख्या आउँछ, तथ्यसँग जोडिएको छ कि बर्डले विन्डोबाट उडेको छ - एउटा संकेत भन्छ कि मृत व्यक्तिको यो आत्माले तपाईंलाई केहि सम्झना वा केही कुराको चेतावनी दिन चाहन्छ। यो पनि विश्वास छ कि विन्डो मार्फत, जुन पहिलेको समयमा मरेको संसारमा जीवनको संसारबाट संक्रमणको प्रतीक चिन्ह लगाइएको छ, एक चराले मानिसलाई अर्को संसारमा कल गर्न सक्छ। यो विश्वास तथ्यको कारण थियो कि अनुच्छेद अनुसार, मृत अवस्थामा घरबाट बाहिर खिचिएको एपर्चर को माध्यम ले बाहिरिएको थियो।
सामान्यतया, यो सबै अंधविश्वास संग धेरै दुखाइ छैन। कसैलाई विश्वास छ कि चिन्हको व्याख्या निर्भर गर्दछ जुन पक्षमा तपाईंको घरको सञ्झ्यालमा उडेको छ। उदाहरणका लागि, एक कबूतर, यसको विपरीत, राम्रो घटना, विवाह, वा परिवारमा थप गर्ने प्रतीक्षाको सन्देश हो। अन्य स्रोतहरूको अनुसार, यो चराले संकेत गर्दछ कि मृतक रिश्तेदारहरू आफ्नो आत्मा सम्झन चाहन्छन्। असामान्य, शायद नै, तर अझै पनि यो हुन्छ कि एक रातोपना घरमा पुग्न सक्छ। यदि तपाईंको विन्डो यस pichuga को लागि आकर्षक भएको छ, परेशान हुन नसक्ने भए - यस्तो अतिथि एक अप्रत्याशित अप्रत्याशित सम्पत्तिको दूत हो।
बर्डको व्यवहारको आधारमा साइन को एक फरक व्याख्या पनि छ: यदि यसले सञ्झ्याल बाहिर घुमायो, तर कोठामा प्रवेश गरेन, यो एउटा चिन्ह हो जुन तपाईंको लागि सबैभन्दा राम्रो समाचार चाँडै आउनेछैन। यदि बर्ड तपाईंको विन्डोमा मृत्यु भएको दुर्घटनाग्रस्त भयो, यो खराब छ - यो मानिन्छ कि त्यस्तो दुखद घटनाले परिवारबाट कसैको आशाजनक मृत्युको चेतावनी दिन्छ।
तर वैसे पनि, यदि चरा सञ्झ्यालमा उडेको छ भने, ओमनले तपाईंलाई निराश बनाउन अनुमति दिँदैन। तिनीहरू भन्छन् कि यस्तो अन्धविश्वासको नकारात्मक प्रभाव घटाउन, यो केही खिडको बाहिर सञ्झ्यालमा फ्याँकिएको छ र तीन पटक "खानाको लागि आउँदैन, आत्माको लागि होइन" भन्नका लागि पर्याप्त छ। यो संस्कार काम गर्नु पर्छ, भले पनि तपाईले यसलाई गरिरहनु भयो।
हाल, कम व्यक्तिहरूले एक सय प्रतिशतमा चिन्हमा विश्वास गर्छन्। लामो समयको लागि पहिले नै वैज्ञानिकले पक्षी र जादुई संसार बीचको सम्बन्धको अभावको सार्थक साबित गरेका छन्। तर यदि क्रूज अतिथिहरू तपाईंको घरमा गए भने, उसलाई डर नदिनुहोस्। भित्तामा आगन्तुक तपाईंको घरबाट टाढा बाहिर बाहिर मा खुल्ला विन्डो को केहि टुक्रा या बीउ छिड्काउनुहोस्।
कसरी एक सुपर शक्ति विकास गर्ने? कसरी आफैमा सुपरस्क्रिप्शन पत्ता लगाउने?
नाम Mansour को अर्थ नामको व्याख्या
चिली सरकारले2वर्ष अघि बनाएको यूएफओ बारे भिडियोलाई अस्वीकार गर्यो
जादुई संख्या। संख्याहरु को जादू - के यो छ?
शारीरिक - के हो?
शीर्ष स्तर डोमेन। शीर्ष-स्तर डोमेन सूची
प्रवृत्ति कट Shaggy
सबै भन्दा लोकप्रिय विरोधी-एलर्जी चक्की
खुट्टा मांसपेशीमा लागि आधारभूत अभ्यास
जाम संग तला केक कसरी खाना पकाउनु
पुनरावृत्ति भागबाट शिल्प: विचार